Muslim hijab hat yeMuslim vana vechidiki uye vakuru
Turban heti dzinonyanya kugadzirwa nengowani neheti. Vanonyanya kukodzera vana vechiMuslim, vechidiki uye vakuru. Iwo ari nyore uye akanaka, achibvisa kudiwa kwekupfeka ngowani uyezve kupfeka ngowani. Rakanaka uye riri mumhepo.
Skafu yepwere yechiArab yedonje sikavha yepwere yedonje sikarafu yepwere yechiArab sikavha yedonje, ruvara rwechiArab, ruvara: white background safflower, white background maruva machena, matauriro: 38 inches-48 inches, kurongedza: 1 / bhegi. 1 gumi nemaviri / bhokisi. 10 gumi / yakajairwa mudziyo wekutengesa kunze kwenyika. Kambani yedu inopawo Arabian mercerized donje turban, Arabian Military turban, Arabat sikavha, Arab wool embroidery sikarafu, nezvimwe zvigadzirwa zveArab.
Cherechedza: Zvemaodha epasi rese:
Isu tinokurudzira kuti utarise tsika uye tariff mirau yenyika yako / dunhu usati watenga. Semutengesi muChina, hatigone kufanotaura kuti mitero kana mari ichabhadharwa. Mutengo wemabasa nemitero ibasa revatengi vedu. Kana iwe uchida chero masevhisi akakosha kana uine mibvunzo nezve yedu yekutumira mutemo, ndapota taura nesu tisati taisa odha.
Zvakapfuura: Mufashoni yeOman yakarukwa ngowani
Zvinotevera: Muvara weArabia heti yakarukwa ine maburi uye isina maburi
MuMuslim hijab hat
Varume vechiArab vechiMuslim vechinyakare Jacquard Headscarf
Muslim kunamata tauro Hajj tauro
Iro gumbeze rekufambira rinoshandiswa nevaMuslim mazuva ese
Yakapfava uye Yakagadzikana yeArabia chena ngowani
Arabic warn-dyed multi-color turban
Best Muslim Cap, Muslim Cap Black, Ciput Hijab, Mens Mosque Hats, Wool Kufi, Hijab Dupatta,